Af-Soomaali - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Luuqada Soomaaliga)
Luqadda rasmiga ah ee
Af Soomaali (Af-Ingiriis: Somali Language; Af-Carabi: لغة صومالية) waa luuqad Kushitik ah oo lagaga hadlo wadanada Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Jabuuti, dhulka ay Itoobiya gumaysato iyo dhulka kiinya gumaysato meelo oo aduunka ka mid ah. Luuqada Af Soomaaligu waxay ka mid tahay luuqadaha kushiitiga loo yaqaan ee lagaga hadlo bariga iyo badhtamaha Afrika, iyo meelo ka mid ah qaarada Aasiya.
Dhaqanka Soomaalida waa Mid hodan ah oo Cajiid ah, Dad weynha aduunkana la yaabeen. Dadka somalida isku dhaqan bey ahaayeen mudooyin quruuno ah, oo ay ku dhaqmayeen dhaqancaaki wanaagsan.
File:46632 153615807990781 100000270872126 408997 1954411 n.jpg
2 Qoristii Far Soomaaliga
3 Olalihii Horumarinta Reer Miyiga iyo Qoristii Far Soomaaliga.
4 Lahjadaha Af Soomaaliga
5 Far Soomaali
6 Tirada Dadka ku hadla Af-Soomaaliga
7 Meelaha lagaga hadlo
Soomaaligu waa mid ka mid ah afafka ugu muhiimsan Geeska Afrika, waana ka rasmi wadanmada [Soomaaliya], iyo Jabuuti,waxaa kaloo si wayn loogaga hadlaa qaybo ka mida Itoobiya iyo Kenya. Waxuu ka tirsan yahay afafka loo yaqaan Kushiitik oo ah laan ka tirsan bahda luqadaha Afro-Aasiyatik. Kushiitikna wuxuu ka sii yahay Kushiitik Bari, waxaana ku hadla qiyaastii 15 milyan oo qof. oo ku nool waddamada Soomaaliya,Jabuuti, Kiinya iyo Itoobiya sido kale waxaa afsoomaaliga ku hadala dadka iygu ah qurbojoogta.
Wakaalada Madbacada Qaranka, Tiyaatarka, Wakaalada Filimida iyo wasaarado badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka qorista iyo horumarinta Af Soomaaliga. Bardera Polytechnic Languages Department
Lahjadaha Af Soomaaliga in kasta oo ay Badantahay, hadana waxaa la yiraah, "Waxaa jira Maxaa Tiri iyo May." Afka Soomaaliga waxa loo qaybiyaa labo qaybood oo kala ah:
1.af maxaa tiri.
Maxaa Tiri waa af Halbeega Soomaaliyeed ee cilmiga iyo culuunta lagu barto ahna kan qoran.
Lahjada Maay waxaa looga hadlaa inta badan koonfurta soomaaliya qoraalkiisuna weli si rasmi ah layskuguma raacin.
fille dhadig femmine الإناث
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Soomaali&oldid=196569"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 06:26, 1 Nofeembar 2019.